Ntughari Ntughari & Nloghachi - WoopShop ®
Kaadị / ¥0 0
Enwere ike ịkagbu iwu gị niile ruo mgbe ha gafere. Ọ bụrụ na a kwụrụ ụgwọ gị ma na ịchọrọ ime mgbanwe ma ọ bụ kagbuo iwu, ị ga-akpọtụrụ anyị n'ime awa 12. Ozugbo usoro nkwakọ ngwaahịa na mbupu amalitela, ọ gaghịzi enwe ike ịkagbu ya.
Obi ụtọ gị bụ ihe kacha mkpa. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ nkwụghachi ụgwọ ị nwere ike ịrịọ ya n'agbanyeghị ihe kpatara ya.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla adịghị mma na ngwaahịa a kama iweghachi ihe, ịnwere ike ịkpọtụrụ anyị maka nkwụghachi zuru ezu.
Nlaghachị na-agba ọsọ na-emesi ịdị ike anyị ike: nloghachi ọ bụla nwere akara carbon. Yabụ naanị gwa anyị ihe merenụ, ziga foto, ma anyị ga-enyeghachi gị ego gị kpamkpam.
Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ịnwere ike inye onyinye gị na ọrụ ebere obodo ma ọ bụ tugharia ya.
Ọ bụrụ na ịnataghị ngwaahịa ahụ n'ime oge a kara aka (ụbọchị 60 gụnyere gụnyere nhazi 2-5 ụbọchị) ịnwere ike ịrịọ nkwụghachi ma ọ bụ nbanye. Ọ bụrụ na ị nwetara ihe na-ezighị ezi, ịnwere ike ịrịọ nkwụghachi ma ọ bụ nkwụnye ụgwọ. Ọ bụrụ na ịchọrọghị ngwaahịa ị nwetara, ị nwere ike ịrịọ maka nkwụghachi ma ị ghaghị ịghaghachi ihe ahụ n'ego gị, ihe a ga-ejighị ma nọmba nchịkọta achọrọ.
Iwu gị abịaghị n'ihi ihe ndị dị n'ime njikwa gị (yabụ ịnye ebe adreesị na-ezighị ezi).
Gị iji agaghị ngwa ngwa n'ihi na ahụkebe ọnọdụ anọghị n'okpuru nchịkwa nke WoopShop.com (Ie bụghị sụrụ site omenala, egbu oge site a ọdachi).
Ndị ọzọ ahụkebe circumstances anọghị n'okpuru nchịkwa nke WoopShop.com
Inwere ike itinye arịrịọ nkwụghachi n’ime ụbọchị iri na ise ka nnyefe ahụ gachara. Can nwere ike ịme ya site na izitere anyị ozi E-mail.
Ọ bụrụ na ị kwadoro maka nkwụghachi, mgbe ahụ, a ga-edozi nkwụghachi gị, a ga-ejikwa ego akwụmụgwọ na-etinye aka na nkwụnye ụgwọ mbụ gị, n'ime ụbọchị 14. Ngwaahịa ndị a na-ere ere, ego a ga-enye onye ọrụ n'ime akpa ya iji jiri ya na ịzụta n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ na maka ihe ọ bụla, ị ga - achọ ịgbanwe ngwaahịa gị, ikekwe maka otu dị iche na uwe. First ga-ebu ụzọ kpọtụrụ anyị ma anyị ga-eduzi gị n'usoro ndị ahụ. ** Biko enyeghachila anyị azụta ihe ị zụtara ọ gwụla ma anyị nyere gị ikike ịme nke ahụ.